မနိုင်ဝန်ထမ်း တတိုင်ပင်နန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » မနိုင်ဝန်ထမ်း တတိုင်ပင်နန်း
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 11, 2017 in Best Web Awards, Opinions & Discussion |2comments
တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကြွယ်ဟု နိုင်ငံရေးကို တင်စားသည်။ နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိ၊ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိ။ ဖြန့်စဉ်းစားလျင် ကြိုက်သည့်နေရာမှ အစဆွဲ ထုတ်နိုင်သည်၊ အရာအားလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေး ညစ်ပတ်သည်၊ ရှုပ်ထွေးသည် ဆိုကြပြန်သည်။ အချို့ကလဲ နှစ်လုံးထဲနှင့် ဘောင်းဘီကြပ်ကာ ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်၊ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးလုပ်သည် အသံကောင်းဟစ်သည်၊ ပရဟိတ နိုင်ငံရေးဆိုသူပင် ရှိလာသည်။ ။။။။
အမှန်မှာ ဒါတွေအားလုံး နိုင်ငံရေးပင်။ နိုင်ငံရေးသိပ်ပံ ဘာသာရပ် ထွန်းကားလာတော့ သုတေသီ ပညာရှင်များက လက်ဝဲ၊ လက်ယာ စသဖြင့် သတ်မှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးထီးမိုးအောက် သွပ်သွင်းခဲ့သည်။ သူတော်ကောင်းအသွင် နိုင်ငံရေးလုပ်စားလိုသူများကတော့ မနှစ်သက် ဆန့်ကျင်သည်။ ကဗာတွင် ခေတ်စားလာတာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး၊ အမျိုးသားရေး နှင့် ယင်းနှစ်ခု ပေါင်းစပ်သော ရောသမမွှေ လက်ယာစွန်း ကွန်ဆာဗေးတစ်များဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အား သွားမေးလျင် နိုင်ငံရေးအာဏာ မမက်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး (သို့) ကျဆုံးမှာ မကြည့်ရက်ရွေ့ဖြစ်ကြောင်း ရွှမ်းရွှမ်းဝေ ပြောကြမည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်မိသူ အချို့လဲ အစတွင် အဟုတ်ထင် လုပ်ရင်း နိုင်ငံရေး ကြွက်သူတော် ဖြစ်ကုန်သည်။ တည့်တည့်ဝေဖန်ရလျင် လူပြိန်းကြိုက်နိုင်ငံရေး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသေသူများ၊ ခွက်ပျောက်သမားများ၊ အမြတ်ထုတ်လိုသူများ လုပ်လေ့ရှိသည်။ ။။။။
ခေါင်းဆောင်မှုပညာမှာ အများအပေါ် အနည်းစု လူပေါ်လူဇော်လုပ် အညွန့်ခူးစားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးတွင်တော့ ခူးစားတတ်ရုံနှင့်မပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများလို မွေးရာပါ ပုဂိုလ်ရေး စွဲဆောင်မှုလဲ လိုသည်။ လူအများစုမှာ အူတူတူ အတတ၊ နားမလည် ပါးမလည်များဖြစ်ရွေ့ ခေါင်းဆောင်နှင့် လူထုအကြား ကြားခံဆက်သွယ်သည့် အငယ်တန်း နှင့် အောက်ခြေခေါင်းဆောင်များ တတ်သိလိမ်မာလျင် လိမ်မာသလောက် နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် ရေချိန်ကိုက်သည်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ငါတကောကော၊ အငယ်တန်း ခေါင်းဆောင်များက အပေါ်ကိုမှီခို ဆိုလျင် နောက်လိုက်များနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး တိမ်းပါးဖို့သာရှိသည်။ တိမ်းပါးသည် ဆိုရာဝယ် ပါတီမူဝါဒ လွဲချော်ကာ ပါတီကျဆုံးနိုင်သလို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အောင်မြင်လျင်လဲ ဖက်ဆစ်၊ နာဇီ၊ အစွန်းရောက် ဝါဒများလို လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းကျိုးမပေးသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် ဆင်ခြင်တုံကင်းမဲ့သည့် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တတ်သည်။ ကောက်ရိုးမီးသဖွယ် ရေတို တောက်လောင်အား ကောင်းသော်လဲ ရေရှည်တွင် တမျိုးသားလုံး ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးရသည်။ ။။။။
ချင့်ချိန်လွန်းပြန်တော့ တဖက်သား အမြတ်ထုတ် ခံရသည်၊ အချိန်နှင့် ဒီရေ လူကို မစောင့်သမို့ ချိန်ကိုက်လုပ်သော နိုင်ငံရေးတွင် အခွင့်ကောင်း ဆုံးရှုံး အဖတ်ဆည်မရ ဖြစ်တတ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် အလယ်အလတ်ဝါဒီ၊ လက်ဝဲလက်ယာ မစွန်း ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်ဝါဒီ နှင့် နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာမရှိသူ တက်ခနိုကရက် အုပ်ချုပ်သူများ မပြတ်မသားဖြစ်ရင်း ထောင်ချောက်တွင်းကျလေ့ ရှိသည်။ ။။။။
မြန်မာပြည် အုပ်ချုပ်နေသော ရွေးကောက်ခံ ဒီချုပ် အစိုးရ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ။ လတ်တလော လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက်ခများမှာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်ထဲက ရှိနေသည်။ ဒီဖက်ခေတ်တွင်လဲ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်း ကြုံတိုင်း အာဏာရှင်များ အသုံးချသည်။ အာဏာမဲ့သွားတော့လဲ ဆက်လက်သုံးသည်။ ထို့ကြောင့် ဆူပူလှုံ့စော်မှုများကို အရမ်းကာရော ထိတ်လန့် အစိုးရိမ်မပို ရေရှည် ခေါင်းအေးအေးထား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တုံ့ပြန်ရန်လိုသည်။ လက်ခုတ်သံဆိုသည်မှာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်သည်မို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မူဆလင်ကဗာ အားယူ လွှမ်းမိုးလိုသော တယူသန် ကုလားအုတ်ဝါဒီ မာမွတ်တို့ အပြစ်ကင်းသည် ဆိုပါက ငါ့စကားနွားရ ဖြစ်ပေမည်။ အီတွင် ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံ၊လူမျိုးအပေါ် ရှိသည့် သံယောဇဉ်ကွာသည်။ နိုင်ငံခြားသားကတော့ အချက်အလက်ကိုသာ ကြည့်မည်၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ပေတံနှင့် တိုင်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများကတော့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်ပဲသိသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်တိုင် အလားတူ အခြေအနေ ကြုံပါမူ အခြားနိုင်ငံ ပြသနာများအပေါ် ထိုနည်း၎င်းသာ ဖြစ်ပေမည်။ ။။။။
စိတ်ခံစားမှု ဦးစားပေး ပြောဆို ထင်မြင်ချက်များ ထိန်းချုပ်ရမည်။ အခြေအနေကို ဓမဓိဌာန်ကျကျ ရှုမြင်ပါ။ သတိပြုရမှာ မြန်မာ အများစု မစဉ်းစားတတ်တာ ကြာပြီ။ အပေါ်ယံ သင်ကြားချက်၊ ပြီးစလွယ် လိုက်နာမှု၊ အားနဲသော ထိန်းကွပ်မှုများ ယဉ်ပါးနေသော ဆူပူအမြတ်ထုတ်လိုသူများကို ဟောရင်းသာ ပျံတော်မူပေမည်။ ။။။။။
ရရင်ရ မြရင်ချ ရရမြမြချ
ပိုသာလိုလျင် သူများထက် ပိုရှည်သော မျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ ဆိုသောစကား လက်တွေ့တွင် မှန်တဝက် မှားတဝက် သူတော်ကောင်း နိုင်ငံရေး ဖြစ်သည်။ ခေတ်ကာလ အမူအကျင့်များနှင့် မကိုက်ညီ။ ရိုးသားမှု အားကြီးသော အတိတ်တချိန်တွင် ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ မယုံကြည်သူ စင်ကြယ်လိုသူများက မိမိကောင်းအောင်သာ တစိုက်မက်မက် လုပ်ရင်း ပြိုင်ဖက်၊ ရန်ဖက်၊ အဖျက်အမှောင့် အတွန်းအတိုက်များကို အလေးမထား ရှိသည်။ မူဝါဒများ စီမံချက်များတွင် အတက် နှင့် အကျကိုသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အပြတ်အတောက်များ ကျန်နေတတ်သည်။ သူတို့လို တန်ပြန် အဖျက်အမှောင့် မလုပ်ချင်လျင်တောင်မှ တန်ပြန်ခုခံစစ် ကောင်းစွာ ပြင်ထားရန်လိုသည်။ တရားတော် အလိုအားဖြင့် ကလဲ့စားချေခြင်းသည် မဆုံးသော ရန်ငြိုးသာ ဖြစ်စေသည် မှန်သော်လဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး အနေအထားကို သိရမှာဖြစ်ပြီး ပါရမီဖြည့်ကျင့် နိုင်ငံရေး မဟုတ်ကြောင်း သိရန်လိုသည်။ ။။။။
မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးပြီး စစ်တပ်နှင့် ကြိတ်အပေးအယူလုပ် ဖွဲ့သော ဒီချုပ်အစိုးရသက်တမ်း တနှစ်ခွဲ ရှိပြီ။ ရုတ်တရက်ကြည့်လျင် ကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်နေသည် ထင်ရသော်လဲ တပ်နှင့်ရဲအား ထိန်းချုပ်ထားသူ အာဏာရှင်စနစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းလိုသူများမှ အချိန်မရွေး တိုင်းပြည် ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ စီးပွားရေး မနိုင်မနင်းဖြစ် တိုင်းပြည်ပျက်မည်ထင်သော်လဲ ထင်သည့်အတိုင်း မဖြစ်သည့်အခါ မသူတော်တို့ ပလန်ဘီ သုံးနေကျပြီ ဖြစ်သည်။ အခြေအနေ ပိုမဆိုးစေရန် နှင့် ရှေ့ဆက် ခရီးသွားနိုင်ရန် အုပ်ချုပ်ရေး ယန်းဒရား ပြောင်းလဲရေး လုပ်ရတော့မည့် ဖြစ်သည်။ ။။။။
လုံခြုံရေးတပ်များမှာ အစိုးရကို မထောက်ခံသည့်အပြင် အမိန့်နာခံမှု အားနည်းသည်။ ဘုန်းကြီးဆိုး ဦးဝီရသူ အစိုိးရအမိန့် အာခံ လူရှေ့ထွက် ဟောပြောနေမှုမှာ ထင်ရှားသော သာဓကဖြစ်သည်။ လူထုအစိုးရအနေနှင့် မိမိပြုခဲ့သည်များကို တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းထိန် ပြောသလို ခုလောက် ခက်မည် ထင်မထား ဆိုခြင်းမှာ အာဏာရှင်ခေတ် နိုငံရေး သက်တမ်းရင့် ပါတီအဖို့ ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်သည်။ ဒီပုံအတိုင်းဆို ယခင် အာဏာရှင်များလို ဖုံးမနိုင်ဖိမရတော့မှ အထုပ်ဖြေပြသလို ဖြစ်လာမှာစိုးသည်။ အာဏာခွဲဝေရေး ပြသနာကို တိုင်ပင်သင့် တိုင်ပင်ထိုက်သူများအား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြရွေ့ စစ်ဗိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်းပါ။ Big brother သဖွယ် လက်ဝါးကြီးအုပ် ဆုံးဖြတ်မှု ခရီးမတွင် ကြာခဲ့ပြီ။ စစ်တပ်အလိုကျ ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ခြေဥပြင်ရန် ပြည်သူ့ဆန်ဒ ခံယူပွဲလုပ်ပါ၊ မလုပ်နိုင်လျင် ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်ခေါ်ပါ၊ လူထု မန်းဒိတ် တချက်လွှတ် အာဏာကို ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်ဖြင့် ရယူပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ ပြောင်းလဲကာ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထပ်မံ စတင်မှ ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ။။။။
ရလျင်ရ မရလျင် အန်အယ်လ်ဒီပါချမည့် ရဲရဲတောက် ကြောင်ကြီး
မသူတော်တို့ ပလန်ဘီ သုံးနေကျပြီ ….
ဆိုတော့ ….Dအစိုးရမှာရော ပလန်ဘီတွေ Cတွေ မရှိဘူး ထင်လို့လား ဟင်….
ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားရဲ့ စကားကိုမှ အကြွင်းမဲ့မယုံ …
သူတို့ထက် ပိုဆိုးတာက အောက်ဆွဲလော်ဘီ ရွှေကြို ပခြုပ်သည်တွေပဲ …
ခုအရေးမှာ ဘိုထိန် အာထွက်မချောင်တာ အတော်ကျေးဇူးတင်တယ် …
၂၀၀၈ ခြေ/ဥ အကြောင်း ဦးဝင်းတင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာ အခုအထိမှန်တုန်း …